Maitiro ekudzivirira sei Mepu yeIOS kubva pakumaka mazuva ebhuruu | IPhone nhau
Mwedzi mishoma yapfuura, WhatsApp yakaunza chinhu chitsva chaisagamuchirwa. Izvo ndezve iro basa iro maka mazuva acho nebhuruu kuitira kuti tikwanise kuzviwedzera sechiitiko mukendendende yeiyo iPhone, iPod Kubata kana iPad. Chakaipisisa pane zvese ndechekuti hutsva uhu haugone kumiswa uye muchirongwa chekutaura tinogona kuva nechidzitiro chakazara nemavara ebhuruu. Iri basa rinowanikwawo mune mamwe maApplication ekuzvarwa, akadai seMail tsamba hongu inogona kuremara.
Dambudziko nderekuti urwu rudzi rwehungwaru chinhu hachina kungwara kusvika pamhando yepamusoro. Semuenzaniso, ini ndinofunga zvakanaka kuti iwe ufunge kuwedzera meseji sechiitiko chinoti "Ndichazokuona neChishanu na9 o'clock", asi ini handioni zvakakodzera kundimaka neruvara rwebhuruu nguva dzese mumwe munhu anotinyora "Mangwana." Kana, sezvazviri muWhatsApp, zvinotsamwisa kuona misi yebhuruu muMeyili, tinokuratidza kuti sei disable basa mushure mekucheka.
Maitiro ekudzivirira mazuva ebhuruu muMeyili yeIOS
Tinovhura marongero eedu iPhone, iPod Kubata kana iPad.
Isu tinotsvaga iyo sarudzo Tsamba, vanobata, calend. uye tinotamba pairi.
Muchikamu chinotevera, tinodongorera pasi kuenda kuCALENDARS sarudzo uye kubvisa chisarudzo Zviitiko zvinowanikwa muMeyili.
Zvine musoro, kana sarudzo ikabatsira kwauri, zviri nani kuti uisiye yakaitwa. Chero zvazvingaitika, ndinofunga izvi basa richine zvakawanda zvekuvandudza. Semuenzaniso, iwe unogona kunzwisisa zviri nani mamiriro ehurukuro kuitira kuti igoerekana yawedzera nyaya yechiitiko, chimwe chinhu icho mumuenzaniso uri pamusoro chingave "kusangana ne X kusangana neChishanu na9: 00". Kusvikira nguva yasvika uye izvi zvakwenenzverwa, kana usiri kugamuchira akawanda ekugadzwa neemail, zvingave zvirinani kubvisa sarudzo Zviitiko zvinowanikwa muMeyili.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzivirira maMail eIOS kubva pakumaka mazuva ebhuruu
Zvakare imwe iPhone inoputika mumirazvo ichichaja